ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: နင့်နင့်သည်းသည်း
သန့်စင်ပြီးတစ်ကယ်ဖြူ စင်တဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ လောကကြီးကိုလှစေချင်တယ်....
တစ်ခါတစ်ရံတွင် စိတ်ထဲမှ ခံစားချက်တို့အတိုင်း စကားလုံးများကို မခြွင်းမချန် ရေးချချင်မိသည်။ ခံစားချက်များ နင့်လွန်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် ၀ါသနာအား စိတ်ထွက်ပေါက် တစ်ရပ်အဖြစ်အသုံးမချချင်ပြန်။ ခံစားရ သမျှ ခံစားချက်ဟု ပြောလျှင် ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရမည်မို့ မရေးချင်။ သို့ပေမယ့် ခံစားချက် တို့သည် သည်းနင့်လွန်းသည်။ ပေါက်ကွဲလုလု ပွင့်အန်လုနီးနီး ရက်ပေါင်း လပေါင်း နှစ်ပေါင်း ချီပြီး အနာအား လူမသိ သူမသိ ဖုံးဖိထားပါလျှက် ထိုအနာပေါ်သို့ ခဏခဏ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကျလာသည်မှာ ခံစားရခက်လှသည်။
အနာလို့ပြောလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ ဖြစ်သော အနာမဟုတ် စိတ်ဒဏ်ရာ စိတ်တွင်းမှာ ဖြစ်သော အနာဖြစ် သည်။ တွေးသမျှ လုပ်သမျှ အရာရာတိုင်းသည် ကိုယ့်အတွက်ဆိုသည့် ဆန္ဒသည် မရှိသလောက်ရှားသည်။ အရာအားလုံးသည် ကိုယ့်နောက်ကလူ ကိုယ့်ကို မှီခိုနေသူအတွက်သာ အစဉ်တစ်စိုက် ကြိုးစားရင်း ရသလောက် ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ပေးဆပ်ခဲ့သည်နှင့် တန်အောင်လည်း အသီးအပွင့်တို့ဝေဆာကြသည်။ ကိုယ့်သည်ကား ထိုအသီး အပွင့်တို့ကို ခုချိန်ထိ မတို့မထိ မခံစားရသေး။ ထိုအသီးသည် ချိုသလား ငံသလား မမြည်စမ်းဘူး။ ကိုယ်သည်ခုချိန်ထိ ဥယျာဉ်ထဲ ပေါင်းသင် မြက်ရှင်း မြေသြဇာထည့် သည်ခြံကြီး အခြေခိုင်လာအောင် ကြိုးစားနေစဲ တည်ဆောက်နေစဲ ဖြစ် သည်။
သြော် .. သည်ခြံမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း အသီးကျတော့လည်း ငါမစားရ ဘာအရသာလဲ ငါမသိဆိုသည့် ၀န်တိုတွေးမျိုး ကိုယ့်ထံတွင် တစ်ခါမျှ မရှိ။ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားသော အသီးတို့အား စားသုံးသူတို့သည် ချီးမွှမ်းပြော ဆိုကြသည်။ အသီးက ချိုလှသည်။ မွှေးလှသည်။ အာဟာရလဲ ဖြစ်လှသည် ဆိုသည့်အသံနှင့်သာ ကိုယ့်ထံတွင် အင်အားတွေရသည်။ ကိုယ်သည် အနာဂတ်ကို ထလျှောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ကိုယ်သည် ပျော်တစ်ပြုံးပြုံးဖြင့် ဥယျာဉ်ကြီးထဲ ချွေးတစ်လုံးလုံးဖြစ် မညည်းမညူ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသည်။ ဟေ့ ငါတစ်ယောက်တည်း လုပ်နေရတာ ပင်ပန်းလှတယ် လာတစ်လှည့်ရုန်းလှည့်ကြ ငါတော့ အပင်အောက် ရေနွေးခရားအိုးနှင့် နားလိုက်မယ်လို့ တစ်ခါမျှ ကိုယ်မတောင်းဆိုဘူးခဲ့။
တစ်ခါမျှ ကူကယ်ရာမဲ့လိုက်တာဟူလည်း ကိုယ်မငြူစူဘူးခဲ့။ ငါစိုက်လို့ ဒီအသီးချိုတာဟူ ၍လည်း ပဏာမယူ ဘူး။ ငါ့ကြောင့် အရိပ်ခိုဖို့ရလာတာဟူ ၍လည်း မာန်စကားမဆိုဘူး။ ကိုယ်တိုင် ကျေကျေနပ်နပ်ဖြင့် အရိပ်မှာနားပါစေ ချိုသော အသီးစားပါစေ။ ချွေးမစို့ပါစေနှင့် ကိုယ့်လက်တွေပေါက်လို့ သွေးချင်းချင်းနီနေပါစေ ကိုယ်သည်အပြုံးမပျက် ပီတိနှင့် ကြည်လင်သော အဆင်းကို အမြဲပန်ဆင်ထားသူသာဖြစ်သည်။ အချိန်တန် ဒီခြံ ငါ့ခြံ ဒီအသီးငါ့အသီးဟူပြီလည်း ပြန်လည် သိမ်းဆည်းဖို့ ကိုယ့်ထံတွင် ဆန္ဒစိုးစဉ်းမျှ မရှိ။
ပိုးကျတော့လည်း ကိုယ်ပဲ ပြေးပြီးဆေးဖြန်းသင့်တာဖြန်း။ မုန်တိုင်းလာတော့ လည်း ကိုယ်ပဲ ကာသင့်သည်ကာ ချည်သင့်သည်ချည်။ မုန်တိုင်းပြီးတော့လည်း ကိုယ်ပဲပြေးရှင်း။ လာကူလှည့်ပါလား။ ၀ိုင်းလုပ်လေဟဲ့လို့ ကိုယ်တစ်ခါမျှ မခေါ်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်သည် မေတ္တာ စေတနာနှင့် ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်နှင့်သာ သည်ခြံအတွင်းမှ လူသားများအတွက် ကိုယ်ရုန်းပေးခဲ့သည်။ သို့ဆိုပါလျှက် ခြံအတွင်းမှ လူတို့သည် ချိုသော မွှေးသောအသီးများအား ကိုယ်သည် တိတ်တ ဆိတ်ယူစားသည်။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်စိုက်သည်။ ကိုယ့်အရိပ်အတွက် ဒီပင်ကို ပျိုးသည်ဟု ယိုးစွပ်သော စကားများ သည် ကိုယ့်အသည်းတွင် ထုတ်ချင်းခတ် မြှားစိုက်သကဲ့သို့ သွေးစိမ်းကျလျှက် ခံစားရခက်လှသည်။
ထိုဒဏ်ရာတို့အား ကိုယ်သည် လူမသိ သူမသိ ကွယ်ဝှက်ကာသာနေခဲ့သည်။ အပြုံးကို မပျက်ယွင်းအောင် ထိန်းခဲ့သည်။ ကိုယ့်စေတနာဟူသည်ကို မြင်အောင်ဆိုချင်မိသည်။ ကိုယ်သည် လူမသိသူမသိ ကွယ်ရာတွင် ကြေကွဲ ရသည်။ နာကျင်ရသည်။ မြှားသည်လည်း တစ်စင်းတည်းမဟုတ် ။ တစ်နေရာတည်းမှ အနာဟောင်းအား ပစ်မှတ်သ ဖွယ် အကြိမ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခြင်း ခံရသည့်အခါ ကိုယ်၏ အသဲ ကိုယ်၏ စိတ်ဒဏ်ရာသည် ဖွာလန်ကျဲနေလျှက်ရှိသည်။ ကိုယ်သည် အလုပ်ပင်ပန်း ၍ ချွေးဒီးဒီး ကျနေပါစေ ရေတစ်ခွက်သောက်ပြီး ဆက်လုပ်နိုင်သော သူဖြစ်သည်။ ကိုယ်လှော်နေရင်း တက်ပျောက်သွားပါစေ ရှိနေသေးသော လက်ဖြင့် ဆက်လှော်မည့် လူစားဖြစ်သည်။
မည်သည့်ထိမှန်ခြင်းမျိုးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ပြိုလဲအောင် မစွမ်းကြသည်။ ကိုယ်ပြိုလဲသည့်အရာသည် ခြံတွင်းမှ လူသားများ၏ စကားလုံးများ စိတ်ဆန္ဒများ အပြောအဆို အပြုအမူတို့သည်သာ ကိုယ်ပြိုလဲသည့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တစ်ခါတစ်ရံ အံသြသည် ကိုယ်သည် လက်ကိုဖြန့် ၍ပြထားပါလျှက် ကိုယ့်လက်အတွင်း တစ်ခုခု ဖွက်ထားသည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေကြခြင်းအပေါ် တစ်ကယ်ပင် စိတ်မကောင်းလှပေ။ ကိုယ်သည် အရာရာ တိုင်းတွင် ကိုယ့်အတွက်ဟု မတွေးတတ်တော့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်ထံတွင် သိမ်းဆည်းထား သည့် ဖွက်ထားသည့် အရာသည် တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိ။
ကိုယ်သည်လက်ဗလာနှင့်လူဖြစ်သည်။ ကိုယ်သည်အလည်းမအ.။ နုံလည်းမနုံ။ မထုံတတ်တေးလည်း မဟုတ်။ လက်တစ်လုံးခြားလှည့်သွားလျှင်လည်း ငါခံလိုက်ရပြီဟု သိသည်။ သြော်. ဒါ..ငါ.စေတနာထားသည့် ငါ့လူ။ သူ မတောင်းဆိုလျှင်တောင်မှ ငါလုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စ။ သူက ကိုယ့်အပေါ် တစ်လှမ်း ကျော်သွားလျှင်မှ ငါသည်း ညည်း ခံ ပေးရမယ့်လူ ဆိုသည့် အသိဖြင့် ကိုယ်သည် မသိလိုက်မသိဖာသာနေသည်။ အပြုံးမပျက်နေသည်။ ဒါကိုပင် ကိုယ်သည် လူပေါကြီး လုပ်ချင်ရာလုပ် မတရားမှု မှန်သမျှကို ခေါင်းငုံ့ပြီးခံတတ်သူဟု နာမည်တပ်ခံရသည့်အခါ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကြီးသည် ပေါက်ကွဲလုနီးပြီ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းတို့သည် ကြိတ်ကိုက်ရလွန်းသဖြင့် ပြတ်ထွက်လုနီးပြီ။
ကိုယ်သူတို့ထံမှ များများစားစားပြန်မလိုချင်မိပါ။ ကိုယ့်စေတနာကို အသိအမှတ်မပြုချင်နေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ် မစော်ကားပါနှင့်။ ကိုယ်ကြိုးစားသမျှ အသီးအပွင့်တို့အား စားပါ။ အရိပ်တို့အားခိုပါ။ သို့ပေမယ့် အရမ်းကာရော အကိုင်းတို့အား မချိုးပါနှင့်လား။ လုံလောက်ပြီး ပြည့်ဝပြီဆိုလျှင် အလဟသတ် အသီးတွေ ထက်မခူးပါနှင့်လား။ သစ်ပင်ရဲ့ အရိပ်သည် မလုံလောက်လို့ ဒီအပင်တွေခုတ် ဒီနေရာကိုရှင်းပြီး ရွက်ဖျင်တဲ မထိုးကြပါနဲ့လား။ ကိုယ်က ဥယျာဉ်မှုးပါ.။ ကိုယ်စိုက်ထားသည့်အပင်တွေ အခုတ်ခံရလို့ နာတဲ့ရင်ထက် ဘယ်နေရာ ပိုနာကျင်ရအုန်းမလဲ။ ခုချိန်မှာ တော့ ကိုယ်သည် ခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းထားသည့် မြေကွက်လပ်ကြီးတွင် ဟာလာဟင်းလင်း ရင်ဘတ်ကြီးဖြင့် လဲနေသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ကိုယ် ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည်လင်ပီသစွာ မြင်နေရသည်။ ကြယ်တို့သည် မှိတ်တုပ် မှိတ်တုပ်။ လ သည် သာလှသည်။ သို့ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်သော သစ်ပင်တို့သည် ကိုယ့်ဘေးနားတွင်မရှိ။ ကိုယ်ချစ်သော ပန်းရနံ့ တို့သည် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မရှိ။ ကိုယ့်ဝမ်းသည် ဟာလှပြီ။ သို့သော် ခူးစရာ အသီးတစ်လုံးမျှ ကိုယ့်ခြံထဲ တွင် ရှိမနေတော့ပေ။ ကိုယ်သည်ဟာနေသော ၀မ်းကို ကိုယ့်လက်ဖြင့်ဖိရင်း စုတ်ဖွာနေသော ရင်ဘတ်မှ ဒဏ်ရာတို့ဖြင့် ရှင်းနေသာကောင်းကင်ကိုသာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ငေးကြည့်နေမိသည်။ ကိုယ်သည် ငိုချင်လှသည်။ အားရပါးရ ငိုရှိုက်ချင် မိသည်.။ သို့သော် .. ထူးဆန်းလှစွာပင် ကိုယ်၏ မျက်ရည်တို့သည် ပျောက်ဆုံးလျှက် ရှိသည်။
ချစ်သော မောင်နှမများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။ သရုပ်ဖော်ပုံလေးကိုဖြင့် google ကနေ ရှာဖွေပြီး သုံးထားပါတယ်။
Posted by ဆွေလေးမွန်
စံပယ်ချို 13 December 2014 at 14:53
ကိုယ်သည်လက်ဗလာနှင့်လူဖြစ်သည်။ ကိုယ်သည်အလည်းမအ.။ နုံလည်းမနုံ။ မထုံတတ်တေးလည်း မဟုတ်။ လက်တစ်လုံးခြားလှည့်သွားလျှင်လည်း ငါခံလိုက်ရပြီဟု သိသည်။
ရင်ငြိမ်းသူ (Yin Nyein Thu) 15 December 2014 at 05:36
blackroze 15 December 2014 at 10:02
တခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ရှာမတွေ့တာမျိုး
ခံစားမိတတ်တယ်.. ပစ်လည်းအခုကိုယ့်ဘာကို ပျောက်ဆုံးနေသလို
Ma Tint6January 2015 at 19:09
ကိုယ်တိုင်ပြုစုပျိုးထောင် ရေလောင်းပေါင်းသင်ပေးရတဲ့ ပန်းလေးတွေဟာ တစ်ပါးသူအတွက် ဖြစ်သွားတတ်သလို ရှင်သန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူအပေါ် အပြစ်မြင်တတ်ကြတာ လူ့သဘာဝပေါ့ မွန်လေးရေ... ဆောင်းပါးလေး နင့်နင့်သည်းသည်းခံစားဖတ်သွားတယ်။
ဖြူစင်သောစိတ်ကလေးနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ် သူငယ်ချင်း။
အချိန်တွေပေးပြီး လာရောက် လည်ပတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလဲ
ကျေးဇူးအထူးပင်တင် ရှိပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
ငိုသံမကြားရတဲ့ ငရဲပြည်မှာ ငရဲမင်းကြီးရဲ့အပြုံးဟာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့နောက် ငရဲမင်းကြီးက တိုးတိုးညင်းညင်းပြောတယ် ``လွမ်းထိုက်တဲ့သူကိုပဲ လွမ်းလိုက်ပါတဲ့´´....
ဘဝရဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အပိုင်းလေးရောက်လာလို. မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်များ လျော့ရဲလာပြီးဆိုရင် ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး ဘဝအားမာန်တွေကို ပြန်လည် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါစေ။
ဘဝမှာခက်ခဲမှုတွေကြုံလာတိုင်း ဒါဟာ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ မကြာခင်တွေ့ရမယ့်အချိန်လို့ သင်သတ်မှတ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင့်
ကြည်ဖြူပိုင် ရဲ့ နွေဦးမိုး
လေအဝှေ့မှာ ၀ဲကာဝဲကာဖြင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ ဒီအချိန်တွေ မ၀ဲချင် ပင်ယံမှာ နေချင်သေးတယ်.... မကြွေချင် ပင်ယံမှာ လန်းချင်သေးတယ်.. မြင့်ပင်ယံ ဝေဟင်ထ...
အပျိုမ အိပ်ယာပေါ်ဝယ် တစ်လူးလူးတစ်လိမ့်လိမ့်။ ဘေးနားရှိနာရီကို လှမ်းကြည့်တော့ ည ၁၀ နာရီ။ ဟော ခြေသံကြားတယ်။ မျက်လုံးကိုမှိတ် ပြီးတ...
ညသည်လှ၏။ လ သည်လည်း သာ၏။ လှသောညနှင့် သာသောလ တို့ပေါင်းမိသော အခါ လရောင်ဖြာကျ လျှက်ရှိသော ၀ရံတာလေးသို့ တစ်ခါ ရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။ လေအဝှေ...
ဘ၀ဘုံမှာ ပျော်စံရာသာ ကောင်းခြင်းလဲရှိ ဖျက်လဲရှိ ကြုံရ ဆုံရ ဒီလောကဒဏ် မာန်ကိုတင်းရင်း အံကိုခဲ ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ နေပါ ..အမောင်။ ။ အတေ...
တစ်ယောက်ရင်ထဲက စကားကို တစ်ယောက်က မကြားရသည့်အခါ ကျွန်မတို့နှစ်ဦး ကျောချင်းကပ်လျှက် ဝေးကွာ နေသလို ခံစားလာရသည်။ အနေနီးနေပါလှ...
အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း မျက်နှာသစ်။ မေမေ အဆင်သင့်ပြင်ပေးထားသော မုန့်ဟင်းခါးပူပူနွေးနွေးကို ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေး နှင့် ကော်ဖီခါးခါးတစ် ခွ...